अनि पाउँछ बच्चाले पार्यप्त आमा दुध
बच्चालाई स्वस्थ्य र तन्दुरुस्त पार्ने सबैभन्दा उत्तम आहार आमाको दुध हो । स्तनपानले आमा र बच्चा दुवैको स्वास्थ्यको लागि सकारात्मक भूमिका खेल्छ । बच्चा जन्मेको ६ महीनासम्म आमाको दुध मात्र खुवाउनुपर्छ । त्यसपश्चात् दुधसँगै अन्य ठोस खानेकुरा पनि खुवाउन सकिन्छ ।
–प्रायः सुत्केरी भएको दुई–तीन दिनसम्ममा दुध नआउनसक्छ । विस्तारै बच्चाले चुस्न थालेपछि आमाको दुध पनि बढ्दै जान्छ । तर, कहिले काँही अपवादको रुपमा सुतकेरी आमाको दुध नआउन सक्छ ।
–सामान्यतया सुतकेरी अवस्थामा दुध आउनलाई दुई–तीन वटा हर्मोनले काम गरिरहेको हुन्छ । तीमध्ये मुख्य प्रोल्याक्टिन र अक्सिटोसिन हुन् । प्रोल्याक्टिन नामक हर्मोनले शरीरमा दुध बनाउँछ । अर्को तर्फ अक्सिटोसिनले दुध बाहिर निकाल्न मद्दत गरिरहेको हुन्छ ।
खासगरी प्रोल्याक्टिन (दुध बनाउने हर्मोन) रातको समयमा बढी सक्रिय हुन्छ । यदी रातको समयमा बच्चालाई दुध चसाइएन भने आमाको दुधमा स्वतः कमी आउँछ । तर्थि नवजात शिशुलाई प्रत्येक दुई घण्टामा दुध चुसाउन आवश्याक छ । रातिको समयमा पनि निरन्तर दुध चुसाइराख्नुपर्छ ।
–कतिपय आमाको दुध बच्चाको लागि पर्याप्त हुँदैन भन्ने धारणा पाइन्छ, यो गलत हो । बच्चालाई समय–समयमा दुध चुसाइरहने हो भने आमाको दुध बच्चालाई पर्याप्त हुन्छ । यदी बच्चाले १५ मिनेट जति लगातार दुध चुस्छ र एक–डेढ घण्टासम्म सुत्छ वा खेल्छ भने बच्चालाई पर्याप्त दुध पुगेको मानिन्छ । यसका लागि आमा स्वस्थ्य हुन आवश्यक हुन्छ ।
–दुध बढाउन कस्ता खानेकुरा खान सकिन्छ भनेर चिकित्सा क्षेत्रमा ठोस अध्ययन भएको पाइदैन । तर, यति सत्य हो, दुध चुसाइरहेका सुत्केरी आमाले पोषिलो खानेकुरा खानुपर्छ । अब जानौं दुध बढाउन खान आवश्यक पदार्थबारेः
के खाने दुध बढाउन ?
१. झोलिलो खाचनेकुरा – सुत्क्री आमाका लागि झोलिलो खानेकुरा एकदमै आवश्यक हुन्छ । जसका लागि ज्वानोको झोल, विभिन्न सुप, नीमको रस, गेडागुडीको झोल आदी नियमित खानुपर्छ ।
२. प्रोटिनयुक्त पदार्थ– दुधसँगै स्वस्थ्य रहन सघाउ पु¥याउन प्रोटिनयुक्त खानेकुरा खानुपर्छ । यसका लागि माछा, मासु, सागपात, गेडागुडी, फलफूलजन्य खानेकुरा आवश्यक हुन्छन् । अन्य समयभन्दा सुत्केरी अवस्थामा झनै पोषिलो खानेकुरा आवश्यक हुन्छ । साथै, बच्चाले करीब ६ महीनासम्म आमाको दुधबाटैआवश्यक तत्व परीपूर्ती गर्छ । त्यसैले आमाले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि हुने खानेकुरा पनि खानुपर्ने हुन्छ ।
यो हेल्थ टिप्स आजको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।